Aha: ranmụnna Urantia (akpọrọ: ị-ran'-sha)
Onye guzobere: Dr. William S. Sadler
Ofbọchị ọmụmụ: 1875 (nwụrụ 1969)
Ebe amụrụ onye: Chicago
Afọ (s) tọrọ ntọala: 1950-1955
Ederede Dị Nsọ ma ọ bụ nke A Na-asọpụrụ: Akwụkwọ Urantia bụ ederede dị nsọ. Urantia Foundation na-ekwu na ejiri akwụkwọ a mee ihe dị ka nduzi mmụọ nke ọtụtụ okpukpe dị iche iche. O nwere ihe karịrị peeji 2,000 ma kewaa ya na edemede 200 nwere ozi banyere Chineke, ihe ndị ọzọ karịrị mmadụ, akụkọ ntolite nke ụwa na ụwa ndị ọzọ, mmepe nke mmadụ, na ebumnuche, akụkọ ihe mere eme, na ozi nke Jizọs Kraịst. Ekere ya na ngalaba ano: Nkebi nke mbu: Central na Superuniverses; Nkebi nke Abụọ: Eluigwe na Ala; Nkebi nke III: Akụkọ banyere Urantia; Akụkụ nke anọ: Ndụ na Ozizi Jizọs.
Size nke otu: Enweghị ndekọ nke ọnụ ọgụgụ ziri ezi, mana ngụkọta nke 250,000 Urantia Books ka ebipụtala. Urantia dabeere kpamkpam na Akwụkwọ Urantia nke na-achọghị ka ndị na-agụ ya sonye n'otu chọọchị ma ọ bụ gbasoo ụkpụrụ ụfọdụ. Akwụkwọ Urantia bụ ihe nduzi nye okpukpe niile, yabụ etu ndị otu na-agụ akwụkwọ ahụ nwere ike ibu nnukwu. Ọtụtụ ọrụ dị na ntanetị maka ndị nwere mmasị na Urantia.
Sadler kụziri n'ụlọ akwụkwọ ọgwụ na Post-Graduate na Mahadum Chicago, na afọ iri atọ ọ bụ onye nkuzi na Pastoral Counselling na McCormick Theological Seminary. Ọ bụkwa ya dere ọtụtụ akwụkwọ. N’agbata afọ 20 na 30, ọ nwere mmasị n’otu n’ime okwu ikpe ya. Onye ọrịa a bịara ịhụ ya mgbe nwunye ya gwara ya na ya na-ekwu okwu n'ụra ya, ọ dịkwa ka ọ na-ekwu maka mmadụ dị iche iche a na-akpọ ndị mkpughe. Kpụrụ kọntaktị ahụ nọ n'ụra kpamkpam n'oge nnyefe ahụ ma ọ nwere obere ma ọ bụ enweghị mmasị na usoro ahụ mgbe ọ mụ anya. Site na nnọkọ ndị a pụta Akwụkwọ Urantia. Sadler haziri otu iji tụlee ihe anakọtara site n'aka onye ọrịa a na ndị ọzọ na 1934-1935. A kpọrọ otu ahụ Nzukọ. E hiwere Urantia Foundation, nke onye isi otu ya na mmadụ ise nọ na ya, ka ọ bụrụ otu agụmakwụkwọ na-enweghị uru na afọ 1950.
Akwụkwọ Urantia bụ ntọala nke nkwenkwe nke Urantia Foundation. Akwụkwọ ahụ kọwara Urantia ka ọ bụrụ aha ochie maka ụwa. E nwere ihe ise n’uche nke mere n’oge gara aga nke ihe a kpọrọ mmadụ; nke-anọ bu ndu nke Kraist na nkpughe nke ise bu nkpuru Urantia. Akwụkwọ a ekwughị okpukpe zuru oke. Urantia enweghị ndị ụkọchukwu ma ọ bụ nkwenye a chọrọ ka ọ kwenye na ya, ọ nweghịkwa ụkpụrụ omume. Enwere otutu nkuzi nke Urantia Book.
Akụkụ nke mbụ m nwere akwụkwọ 31 ma kọwaa ọdịdị nke Chi, eziokwu nke Paradaịs, nhazi na ọrụ nke etiti na ndị isi nchịkwa, ndị mmadụ nke eluigwe na ala, na oke njupụta nke usoro mgbanwe. Ọ bụ ndị nchịkwa ime mmụọ 24 mepụtara akwụkwọ ndị a na-arụ ọrụ nke iwu sitere n'aka ndị isi chi dị elu, nke a na-akpọghị "Oge Ochie," na-ekwu na ha na-eme nke a na mbara ala Urantia n'afọ 1934 AD.
Akụkụ nke Abụọ, nke nwere akwụkwọ 25, na-akọwa Mpaghara Mpaghara, nke bụ ọrụ nke Onye Okike Ọkpara nke Paradaịs Paradaịs nke Michael. O nwere usoro 100 nke kpakpando, nke obula nwere sistemu 100 nke uwa dum madu bi. Usoro nke ọ bụla ga - emecha nwee ihe dị ka mpaghara 1,000. Urantia (Earth) bu nke uwa. Maịkel, Ọkpara nke Chineke na Nwa nke mmadụ (nke a na-akpọkwa Jizọs onye Nazaret), bụ Ọkaakaa nke eluigwe na ala nke Urantia. N'ime eluigwe na ala, Nna eluigwe na ala (Chineke) bụ onye dị ugbu a. Ndi umuaka ndi nochiri anya Nna ha n’ebe uwa di elu. Kaosinadị, ọ ka nọ n'uche ụmụ ya na-anwụ anwụ site na "mmụọ bi n'ime ya," ma ọ bụ "Ndị Na - eme Mgbanwe Echiche."
Na Nkebi nke Atọ, akwụkwọ 63 kọwara akụkọ ihe mere eme nke Urantia. Ihe dị ka 1,000,000,000 afọ gara aga, Urantia ruru ogo ya ugbu a. Akụkụ a na-akọwa akụkọ ihe mere eme nke mbara ala, mmepe ala ya, ntọala nke ndụ, mmalite na akụkọ ihe mere eme nke mmadụ, mmepeanya na-agbanwe agbanwe, ụlọ ọrụ ụmụ mmadụ na gọọmentị. Ọ na-atụlekwa echiche Atọ n’Ime Otu, mgbanwe n’okpukpe, mmụọ nke Chineke bi n’ime ya, ịlanarị mmadụ, na onyinye nke Michael Michael.
Akwụkwọ nke anọ, akwụkwọ ikpeazụ, nwere akwụkwọ iri asaa na asaa nke kọwara ndụ na nkuzi Jizọs. Ọ na-akọwa Nwa nke mmadụ nke nwata, ntorobịa, njem mbụ ya, ozi onwe onye na nke ọha, mmadụ iri na abụọ ahụ na-eso ụzọ ya, na nnwale ya, ọnwụ ya na mbilite n'ọnwụ ya
Ntughari: Otutu echiche di na akwukwo Urantia bu ihe achoputara na oru mbu tinyere ihe odide nke ndi Seventh-Day Adventist. Urantia etinyela aka n'ọtụtụ iwu. Na 1991, Urantia Foundation gbara Kristin Maaherra akwụkwọ maka ịda iwu ikike nwebisiinka, yana n'afọ 1996, ha gbara ụlọ ọrụ Fellowship Uversa Press na Jesusonian Foundation maka mmebi iwu ụghalaahịa. Urantia ejiri ụghalaahia ma debanye aha aha Urantia na akara ngosi Concentric-Circles (nnukwu gburugburu na-acha anụnụ anụnụ nke nwere obere gburugburu abụọ n'ime ya.) Ihe nnọchianya Concentric-Circles dị na Pụrụ Iche nke Michael.
Utù Urantia International (IUA), nke Urantia Foundation haziri, bụ nzukọ ndị na-agụ akwụkwọ. Ọ bụ nhazi ọrụ, mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ọrụ iji guzobe ịmụchikwu akwụkwọ Urantia Book na ịgbasa nkuzi ya n'usoro. Ebumnuche nke IUA bụ ịgbasa nkuzi nke Akwụkwọ ahụ site n'okwu ọnụ, n'onwe ya, n'ụzọ dị nwayọ dịka nke Jizọs. IUA na-ezo aka na ndị na-agụ akwụkwọ maka otu ọmụmụ ihe, na-aza ajụjụ ndị na-agụ akwụkwọ, na-akwado nzukọ, nzukọ ọmụmụ, na nzukọ, ma na-azụlite nkuzi na nduzi ndu. Urantia Foundation na-ebipụta Urantian News ugboro abụọ kwa afọ.
N’ọnwa Eprel nke afọ 1996, Urantia Foundation mere ọgbakọ nke ndị ntụgharị asụsụ nke mbụ ya na Paris, France. Ha lekwasịrị anya na mmepe nke akwụkwọ ọkọwa okwu nke okwu pụrụ iche na Akwụkwọ Urantia, ịhazi kọmputa, sọftụwia, ịhazi ya, ntinye okwu nkwukọrịta e-mail, ntụgharị asụsụ nke echiche kacha sie ike n'ime akwụkwọ a, yana mkpa na etu o si eme otu ndị nsụgharị. A tụgharịala Akwụkwọ Urantia gaa n'asụsụ iri, gụnyere ndị a: French, Finnish, Spanish, Russian, Dutch, Korea, Swedish, Estonian, German, and Italian. French, Spanish, na Finnish dị maka mbipụta maka ọha na eze, edekwala asụsụ asaa ndị ọzọ. Urantia na-eme ka ọrụ dị na ntanetị. A na-enye ọtụtụ n'ime ọrụ ndị a na ibe ndị edepụtara n'okpuru, dị ka itinye aka na otu ọmụmụ ihe na akwụkwọ ọmụmụ.
Ugba, Martin. 1995. Urantia: Nnukwu Okpukpe .tù nzuzo. Amherst, NY: Akwụkwọ Prometheus.
Urantia Foundation. 1955. Akwụkwọ Urantia. Chicago.
Michelle Sheble kwadebere
Mgbanwe Okpukpe Ọhụrụ
Oge Nkwụsị, 1996
Ntughari ikpeazụ 07/25/01